ओली पक्षका सांसदको जवाफः पार्टीको ह्वीप पालना गरी मुख्यमन्त्री विरुद्ध मतदान
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात जना सांसदले संसदीय दललाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले केपी शर्मा ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेकाले सातै जनाले स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् ।
स्पष्टीकरण जवाफ दिँदै उनीहरूले पार्टी केन्द्रको ह्वीपलाई पालना गर्दै मुख्यमन्त्री विरुद्ध मतदान गरेको जवाफ दिएका छन् । सातै जनाले पार्टी केन्द्रको निर्देशन पालना गरेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध मतदान गरेको बताएका हुन् । एमाले ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरू पठानसिंह बोहरा, लीलाधार भट्ट, रतन थापा, माया तामाङ, ग्याल्बु बोहरा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मीले मुख्यमन्त्री विरुद्ध मतदान गरेका थिए ।
संसदीय दलका नेतालाई प्रदेशसभा सदस्यहरूले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ,‘एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कमरेड कर्णबहादुर थापा र सचिव कमरेड राजेन्द्र रावलले जारी गरेको च. नं. ३२ को पत्रअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थिति गराई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने केन्द्रको निर्देशन अनुसार ह्वीपको पालना गरी मैले पार्टी विधि, विधान, सिद्धान्त र निर्णय अनुसार नै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार विरुद्ध मतदान गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
यसका साथै दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
स्पष्टीकरण बुझाएका सांसदहरूले प्रदेश संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भइनसकेको अवस्थामा सोधिएको स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ नहुने समेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयले अहिले स्पष्टीकरण पत्रमाथि अध्ययन भइरहेकाले आवश्यक निर्णय त्यसपछि मात्र लिने जनाएको छ । माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत रहेको संसदीय दलले समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गर्‍याे । तीन मन्त्रीले राजीनामा दिए लगत्तै चार मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री लिएर नेपाल समूह प्रदेश सरकारमा कायमै छ ।
मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि एमाले संसदीय दलको बैठक मंगलबार बसेको थियो । बैठकले भट्टको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा ओली पक्षका सांसदहरूले विश्वासको मत दिन नहुने भन्दै फरक मत राख्न चाहे पनि बहुमत पक्षले दिएको थिएन ।
प्रकाशित मिति : जेठ २७, २०७८ बिहीबार १३:२३:२२, अन्तिम अपडेट : जेठ २७, २०७८ बिहीबार १३:२६:३४